Version 0.6.1 – Buddypress fidirana lalindalina kokoa
Aogositra 2, 2010 amin'ny tolotra 8 Comments
Buddypress, te-ho buddies?
Io dikan-manana fifangaroana ny lafin-javatra vaovao sy roa bibikely fixes amin'izy mianakavy rehetra, malaza indrindra dia ny koa ny fanohanana buddypress lalina kokoa izay mampiditra fanohanana ny asa renirano amin'ny fiteny samihafa. Midika izany fa raha misy mpampiasa hevitra amin'ny lahatsoratra hafa mampiasa dikan-noho ny tany am-boalohany ny iray – ny asa atao dia ho araka ny tokony renirano adika (anao nametraka mandika Default teny). Ny renirano dia mampiseho ihany koa ny fandikan-teny atao amin'ny tafiditra mpampiasa. Dia izao koa ny vondrona ho an'ny mpampiasa ny Plugins amin'ny toerana buddypress amin'ny http://buddypress.org/community/groups/transposh-translation-filter-for-wordpress ka raha samy mampiasa sy tia azy, manana ny toerana mba hanehoana izany fitiavana izany, raha mankahala azy ireo, ka mandehana any no manana ny hiantra.
Endri-javatra iray hafa izay nanampy noho ny Yoavâ € ™ ny famelabelarana dia ny fanohanana ny RTL lohahevitra izay tsy inona fa fanohanana no RTL naorina (toy ny folo roa-polo, ary ny buddypress Default lohahevitra). Ny teny hebreo, Arabo, Get, Urdu sy ny mpampiasa Yiddish Ho faly izy ireo izao tontolo izao fiadanana ho haingana, ary mitsahatra ny fanaovana nukes sy gefiltes.
Fixes hafa dia ahitana
Amboary ny MS mandika sy tsy teny frantsay (Ooops)
Manitsy sy manamboatra urls Url olana rehefa mampiasa fandikan-teny fanao rafitra (ohatra:. rehefa iombonana amin'ny .html) (misaotra Claudio)
Auto fandikan-teny io dia tsy mety amin'ny fomba Ovay raha fiara fandikan-teny napetraka ho eny (Oay hafa)
Manantena youâ € ™ ll hahazo izany fanafahana toy ataontsika.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, buddypress, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin
Jona 18, 2010 amin'ny tolotra 20 Comments
No hiomana ny vuvuzelas mbola ho amin'ny WordPress 3.0 fanafahana? Ankehitriny dia afaka manao izany sy hankafy ny zava-misy fa ny farany Transposh plugin for WordPress manolotra fanohanana ny vaovao WordPress, ary toy ny Bonus, fanohanana ny buddypress. Io fanohanana ny buddypress izao dia midika fa URLs niteraka ka namaly ny dia, indro, translatable.
More fiovana ahitana fanohanana ho an'ny toe-javatra fanampiny izay nanao ny UI unworkable, raha ohatra jQuery fitaovana nampiasaina tamin'ny misy plugin na foto-kevitra, ankehitriny – isika dia afaka manao izany asa.
Toy ny teo aloha satria lehibe vaovao dikan-WordPress dia avy, isika nandatsaka fanohanana ofisialy ho ny zokiny WordPress 2.8 Version, plugin tokony mbola miasa fa tsy ho fitiliana sady nitampintampina noho izany dikan-ary fahazoan-dalana fa hanatsarana.
Toy ny mahazatra – dia te-hihaino anareo hiala, izay manasongadina tianao? ary izay ekipa dia handresy izao tontolo izao kapoaka? Mitete ny soso-kevitrao fotsiny eto.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: buddypress, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress 3.0, WordPress plugin